Kamiin Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Dalka Maali. – Calamada.com
Kamiin Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Dalka Maali.
calamada September 29, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay weerar dhabba gal uu ka dhacay qeybo ka mid ah dalka Maali kaasi oo sababay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay askarta dowlada Maali.
Kamiinka ayaa loo dhigay kolanyo ka tirsan ciidamada dowlada daba dhilifka dalka Maali kuwaasi oo ku socdaalayay wadada isku xirta magaalooyinka Qowsi iyo Doorow oo wada dhaca dhanka Konfureed ee dalka Maali.
Inta la xaqiijiyay weerarkaasi dhabba galka ah waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowlada Maali’iyadoona lagu dhaawacay afar askari oo isla ciidamada dowlada Maali ah.
Mu’asasada Rimaax ee garabka warbaahineed ee Mujaahidiinta Ansaaru diin oo taabacsan Mujaahidiinta Al-qaacidah ayaa baahisay in ciidamada Mujaahidiinta Jamaacada Ansaaru diin ay fuliyeen weerarkaasi dhabba galka ah.
Sidoo kale Qoraalka kooban ee Mu’asasada ayaa lagu xusay in marka laga soo taga khasaaraha nafeet sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta waxey gubeen labo gaari oo kala ah gaari Qooqan ah oo qori uu saaranyahay iyo sidoo kale gaari Booyad ah oo shidaal waday.
Sidoo kale Bayaanka kooban ayaa lagu xusay in ciidamada Mujaahidiinta werarkaasi dhabba galka ah ay ku qaniimeysteen afar qori oo nooca AK47 Ah.
Ciidamada Mujaahidiinta Jamaacada Ansaaru diin ayaa weeraro joogta ah oo ka dhan ah dowlada daba dhilifka Maali iyo ciidamada Nasaarada Faransiiska ka fuliya gudaha dalkaasi.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 27-12-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Idaacadda Andalus 27-12-1437 Hijri.